ngomphathi ku 06-05-2020
I-Sichuan XiangYue Amandla ezinto zomugqa weCop. (I-XY Tower) yasungulwa ngo-2008. Emizameni yazo zonke izinto, inkampani ikhula ngokushesha okukhulu. Amakhasimende ethu avela kakhulu ezifuywayo naphesheya kwezilwandle, izinkulungwane zemibhoshongo zilethwa kumakhasimende futhi zisebenzisa iChina, iSudan nezinye eziningi ...
I-XY Tower njengebhizinisi elihola phambili esifundeni sethu, inhloko yesifunda ikunaka kakhulu futhi idinga ukuphathwa kokukhiqiza okuqinile namandla okukhiqiza nokuvikelwa kwemvelo kwemboni. Ngokuvamile, uzoletha iqembu lakhe eXY Tower ukuze likhuthaze ...
Ngenxa ye-COVID-19, ikhasimende lethu alikwazanga ukuza efektri yethu ukuze ihlolwe umbhoshongo. NgoNovemba 9, ngaphambi kokulethwa, senza umhlangano wombhoshongo. Uhlobo ngalunye lombhoshongo luzohlelwa ngomhlangano. inqwaba ngayinye yezinto zizothunyelwa uhlu lwezinto kumakhasimende naku-5% mo ...
Iphrojekthi yeZuoGong County ifakwe ugesi ngempumelelo
IZuoGong County ingeyeChangDu City, eTibet. IZuoGong ingenye yezindawo ezihlupheka kakhulu kulo lonke elaseChina. Umsebenzi omkhulu wale phrojekthi ukuxazulula inkinga yokuphakelwa kukagesi kwabantu abayi-9,435 emakhaya ayi-1,715 emadolobhaneni angama-33 okuphatha eBitu Township yaseZuoGong coun ...
Ithimba lokuhlola lenkampani kahulumeni evakashele ukuvakasha
I-State Grid nayo iklayenti lethu elibaluleke kakhulu. Njalo ngonyaka, inkampani yethu iwina ngaphezu kwe-15 million USD ku-State Grid futhi ithatha cishe i-80% yemali engenayo yokuthengisa yenkampani yethu. I-State Grid Corporation yase China (State Grid) ibhizinisi likahulumeni (i-SOE) elasungulwa ngo-2002 ngaphansi ...
I-China yakha ukusebenza kokuqala komhlaba kulayini wokuhambisa we-1,100-kv DC
ngomphathi ku 06-11-2017
I-HEFEI - Abasebenzi baseChina basanda kuqeda ukusebenza ngocingo bukhoma ku-1,100-kv ulayini wokuhambisa ugesi ngqo edolobheni laseLu'an esifundazweni sase-Anhui ese-East China, nokuyinto eyenzeka okokuqala emhlabeni. Ukuhlinzwa kwenzeke ngemuva kokwe ...
Hlela bonke abasebenzi ukuze benze i-fire drill
ngomphathi ku 23-08-2017
Umkhiqizo eMyanmar uyathunyelwa
ngomphathi ku 06-04-2017
I-XYTower ithole inkontileka evela eMyanmar kulo nyaka futhi sikwenze ngempumelelo ukuthunyelwa kule nyanga. I-ASEAN ingomunye wabalingani ababaluleke kakhulu eChina. I-XY Tower ibheka kakhulu imakethe ye-ASEAN isho kakhulu. Kubhadane, umatasatasa ...